Jilitaanka hantida farqiga jinsiyadeed ee jilitaanka - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
[Oktoobar 4, 2021] Jaamacadda Georgtown waxay raadinaysaa Kaaliyaha Borofisar Waxbarashada - Barnaamijka Waxbarashada, Weydiinta iyo Caddaaladda Jobs
[Oktoobar 4, 2021] USIP waxay raadineysaa Takhasuslaha Barnaamijka, Campus Global Jobs
Jilitaanka hantida farqiga jinsiga
Waxaa laga yaabaa 31, 2021 CV 0
Kibista Adduunku waxay siisaa jilitaan ahaan aalad is-dhexgal ah oo dadka ka caawisa inay fahmaan isku xirnaanta sinnaanta jinsiga, gaajada, saboolnimada, iyo hantida.
(Waxaa daabacay: Rooti Adduun.)
Muxuu yahay Jilitaanka Barashada Farqiga Farqiga ee Jinsiga?
Jiliddu waa qalab is-dhexgal ah oo dadka ka caawiya inay fahmaan isku xirnaanta sinnaanta jinsiyada, gaajada, saboolnimada, iyo hantida. Waa tallaabada ugu horreysa ee wanaagsan ee dadka aan ka warqabin sinnaan la'aanta qaabdhismeedka, aalad taageero u ah kuwa doonaya faham qoto dheer oo ku saabsan sinnaan la'aanta qaabdhismeedka, iyo ilaha macluumaadka ee khubarada doonaya inay ogaadaan saameynta dhaqaale ee la qiyaasi karo ee siyaasad kasta oo ballaadhisay midabka maanta jira. gaajo, dakhli, iyo xoolo qaybsiga.
Jiliddu waxay ka caawisaa dadka inay fahmaan isku xirnaanta sinnaanta jinsiga, gaajada, saboolnimada, iyo taajirnimada.
Jilidda, kaqeybgalayaashu waxay baranayaan sida siyaasadaha federaalku u abuureen sinaan la'aanta qaab-dhismeedka lahaanshaha iyo waxbarashadu ay yihiin uun laba ka mid ah meelaha badan ee ay saameysay-iyo sida siyaasadahaani u kordhiyaan gaajada iyo saboolnimada bulshada midabka leh.
Jiliddu waxay ku hagaysaa kaqeybgalayaasha fahamka sababta sinnaanta jinsiyadeed ay muhiim ugu tahay joojinta gaajada iyo saboolnimada Mareykanka. Rajadeennu waa in kaqeybgalayaashu, markay noqdaan kuwo aad uga warqaba sinaan la'aanta qaabdhismeedka, inay taageeri karaan siyaasadaha tirtiraya ama / yareynaya kala duwanaanshaha.
Maaddaama jilitaanku xoojinayo muhiimadda sinnaanta jinsiyadeed, waxay u noqon kartaa aalad wehel u ah kaniisadaha, ururada, hay'adaha, dugsiyada, iyo bulshooyinka bilaabay inay ka shaqeeyaan jinsiyadda oo doonaya inay wax badan ka bartaan doorka siyaasadda guud ee ay lahayd, muddo ka dib , abuurista kalaqeybinta qaabdhismeed ee ku saleysan jinsiyadda.
Waa maxay saamaynta jiliddu?
U keen jilitaanka bulshadaada.
Sidee jilitaanku u jajabiyaa caqabadaha?
Waxaa jira siyaabo badan oo looga hadlo ama looga fikiro isirka. Inaad dareentid raaxo la'aan mawduuca wuxuu caqabad ku noqon karaa wadahadalka.
Hadana wada hadaladani waa lama huraan, gaar ahaan hadii aan soo afjarayno gaajada iyo saboolnimada Mareykanka. Tani waa hal sabab oo tusaalayaashu ugu yeerayaan kaqeybgalayaasha inay si aan kala sooc lahayn u doortaan kaararka u xilsaaraya aqoonsi jinsiyeed oo ka duwanaan kara tooda. Tani waxay kaa caawinaysaa inaad jabiso qaar ka mid ah caqabadaha.
Bread for the Word, waxaan ku aragnay jilitaanka oo bedelaya quluubta dadka iyo maskaxda isla markaana ku dhiirrigelinaya inay noqdaan kuwo u heellan inay u adeegsadaan muraayad sinnaan midab shaqadooda.
Diyaar ma u tahay inaad bilowdo? Daawo Keenida jilitaanka bulshadaada oo baro sida.
Sidee ayuu ku yimid jilitaanka iyo halkee lagu isticmaali karaa?
Jilitaanka Jinsiga Barashada Jirka ee Jinsiyadaha wuxuu ahaa dadaal wadajir ah oo ka yimid Bread for World iyo NETWORK. Fikradda iyo naqshadeynta jilitaanka waxaa isla abuuray Marlysa D. Gamblin, khabiir ku xeel dheer arrimaha gaajada, dakhliga, iyo qeybsiga hantida. Marlysa waxay si dhow ula shaqeysay Emma Tacke iyo Catherine Guerrier oo ay weheliso NETWORK si ay u tijaabiyaan jilitaanka Maalmaha u doodista Ecumenical (EAD) bishii Abriil 2017.
Duuliyaha bilowga ah ka dib, rootiga wuxuu u hibeeyay sanad dhan tijaabinta jilitaanka berrinka iyo sameynta sixitaan si loo hubiyo in qalabku waxtar u leeyahay bulshooyinka kala duwan ee ku kala nool goobaha kala duwan.
Qalabkan waxaa loo isticmaali karaa guriga, barashada Kitaabka Qudduuska ah, kaniisadaha, shirar waaweyn, iyo iskuulada, iyo shaqaalaha ka shaqeeya ururada aan macaash doonka ahayn, ururada u dooda, adeeg bixiyeyaasha, hay'adaha dowladda, iyo hay'adaha gaarka loo leeyahay.
Gaaritaanka sinaanta jinsiyadeed micnaheedu waa in dadka oo dhan, ayadoon loo eegin jinsiyada, ay leeyihiin fursado cadaalad ah oo ay ugu raaxaystaan ​​natiijooyin siman.
Haddii aad xiisaynayso adeegsiga jilitaanka, daawo Keenida Arintaan Beeshaada. Fiidiyowgu wuxuu bixinayaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan jilitaanka. Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho Tilmaamaha Fududeeyaha. Tilmaamuhu wuxuu bixiyaa talooyin ku saabsan isu diyaarinta iyo fududeynta jilitaanka meelo kala duwan. Waxaan sidoo kale leenahay a Tilmaamaha Fududeeyaha Fududeeyaha, haddii aadan awoodin inaad si shakhsi ah ula kulanto. Haddii aad rabto inaad qalabkan u keento kaniisaddaada ama barashadaada Baybalka, fadlan sidoo kale soo dejiso Xaashida Waxqabadka Baybalka hoose.
Ma dooneysaa inaad fududeyso jilitaanka? Kala soo bax kheyraadkan:
Tilmaamaha Fududeeyaha Fududeeyaha NEW
PowerPoint jilitaanka Virtual NEW
Raadiyaha Kaarka Waxqabadka NEW
Marabtaa inaad fududeyso jilitaanka shaqsi ahaan? Kala soo bax kheyraadkan:
Qalabka Daabacaadda Jilidda
Xaashida Waxqabadka Baybalka
PowerPoint dhibcaha hadalka
Akhrin dheeraad ah oo ku saabsan jinsiyada iyo gaajada:
Jawaabaha Cunsuriyada ku dhisan ee Gaajada Inta lagu jiro COVID-19 iyo wixii ka dambeeya
Codsashada Lens Sinaanta Sinaanta ee Barnaamijyada Kahortagga Gaajada
Helitaanka Gaajada Hero: Jinsiyada, Gaajada, iyo Saboolnimada
Joojinta Gaajada Mareykanka iyadoo diirada la saarayo beelaha inta badan ay saameysay
Qabsasho Baahsan: Sabab Weyn oo Gaajo
Maxaan sameyn karaa marka xigta si aan u hormariyo sinaanta jinsiyada iyo kala qaadista cunsuriyada?
Hadda oo aad dhammaysatay jilitaanka Jinsiga Farqiga Jinsiga ee Jinsiyadda, waxaa jira waxyaabo badan oo aad sameyn karto. Marka ugu horeysa, waxaan dooneynaa inaan kugu dhiirigelino inaad kaqeyb gasho shaqada fahamka sida looga laabto waxa abuuray sinaan la'aanta jinsiyada – sinaan sinaan. Sinaanta jinsiyadu waa a geedi socodka taasi waxay diirada saareysaa xudunta baahiyaha, hogaaminta iyo awooda dadka Madow, kuwa asaliga ah iyo dadka kale ee midabka leh, iyo sidoo kale a goolka ee lagu gaarayo natiijooyin loo siman yahay, iyo ugu dambayntii natiijooyinka BIPOC marka loo eego dhiggooda caddaanka ah. Tag bread.org/racialequity si aad wax badan uga barato ereygan, akhriso warbixinnada muhiimka ah si aad u fahamto sida sinnaanta jinsiyadeed loogu dabaqi karo siyaasadda si loo joojiyo gaajada iyo wax ka qabashada cunsuriyadda, iyo inaad wax ka barato aaladaha muhiimka ah ee kaa caawinaya inaad sare u qaaddo sinnaanta midab ee shaqadaada!
# amniga dhaqaalaha
Tacliinta iyo amniga iyo nabad dhisida
Hordhac 2 Hub ka dhigis: Video taxane ah
Golaha dugsiga Denver ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyay in booliis laga saaro dugsiyada dadweynaha
June 24, 2020 Warar & Muuqaal 0
Gudiga iskuulka degmada ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyay todobaadkan in booliiska laga saaro dhamaan iskuulada sanadka soo socda si looga takhaluso “cunsuriyada nidaamsan ee caruurta Madow iyo caruurta midabkoodu wajiga yahay [sii wad akhriska…]
Maxay Waxbarashada Nabadda Naga Baran Kartaa Dib-u-habaynta Booliska?
Monisha Bajaj wuxuu ku doodayaa in cilmiga nabada aduunka uu leeyahay aragtiyo qani ah oo la siinayo dib u qaabeynta nidaamka ciidamada booliska iyo tababarada saraakiisha. Saraakiisha "Nabadda" waa in lagu hayaa heer sare runtiina ay taageeraan oo ay horumariyaan nabadda bulshada ay u adeegaan. [sii wad akhriska…]
Xididdada Mareykanka ee Qoto Dheer ee Toogashada Atlanta
March 21, 2021 opinion 0
OpEd-kan ka soo baxay The New York Times wuxuu muujinayaa sida isu soo noqoshada cadaadisyada ay la kulmaan kuwa xambaara culeysyada ugu badan ee nidaamka iyo rabshadaha dhismaha ayaa sidoo kale ah kuwa ugu nugul noocyada kala duwan ee rabshadaha jireed, oo ay ku jiraan dilka. Waxay ugu baaqeysaa barayaasha nabadda inay ku baraarugaan isu imaatinka aasaas u ah baaritaanka caqabadda soo saarista khibradaha barashada si loo iftiimiyo dabeecadaha xagjirka ah iyo qiyamka takoorka ee fududeynaya rabshadaha habdhaqanka iyo in la ilaaliyo dhismayaasha. [sii wad akhriska…]